Inqubomgomo Yobumfihlo - I-Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd - 乐动平台网址,乐动体育app官网入口
I-Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd. ibambe iqhaza embonini yeziqandisi.Sinamathisela ukubaluleka okukhulu ekuvikelekeni kolwazi lwekhasimende kanye nabaphakeli.Leli khasi libeka obala izinqubomgomo zethu maqondana nokuvikelwa kolwazi lomuntu siqu.
1. Ukuthobela Imithetho Neminye Imithethonqubo
Sithobela yonke imithetho kazwelonke nezinqubomgomo kanye neminye imithethonqubo ehlobene nokuvikelwa kolwazi lomuntu siqu.
2. Ukusungulwa kanye Nokuthuthukiswa Okuqhubekayo Kwemihlahlandlela Yokuphatha Ulwazi Lomuntu Siqu
Isidingo sokuvikela ulwazi lomuntu siqu simenyezelwa ngokugcwele kuyo yonke inkampani, kusukela kubaqondisi kuya kubasebenzi abancane kakhulu.Sigcina futhi silandela imihlahlandlela ukuze sivikeleke ngendlela efanele futhi sisebenzise ulwazi lomuntu siqu.Silwela futhi ukuthuthukisa le mihlahlandlela ngokuqhubekayo.
3. Ukutholwa, Ukusetshenziswa kanye Nokukhishwa Kolwazi Lomuntu Siqu
Sikuchaza ngokucacile ukusetshenziswa okungafakwa kukho ulwazi lomuntu siqu.Ngaphakathi kwalezi zingqinamba, sithola, sisebenzise futhi sikhulule ulwazi lomuntu siqu kuphela ngemvume yomuntu othintekayo.
4. Ukuphathwa Okuvikelekile
Silwela ukulondoloza ukuphathwa okuphephile kolwazi lomuntu siqu, futhi sisungule izinyathelo ezidingekayo zokuvimbela ukufinyelela kwedatha okungagunyaziwe, ukulahleka, ukucekelwa phansi, ukuguqulwa noma ukuputshuka.
5. Ukudalula kanye Nokulungiswa
Izicelo zokudalulwa, ukuhlela noma ukususwa kolwazi lomuntu siqu ziyophendulwa esimweni ngasinye kusalindwe ukuqinisekiswa kokuthi lowo ofake isicelo ungubani.
*Sicela uqondise noma imiphi imibuzo ephathelene nedatha yomuntu siqu ku-Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd. General Affairs Division.